Ụwandịigbo – Page 8 – Dedicated to the promotion of Igbo language and culture. (Maka Ịkwalite Asụsụ na Omenala Igbo)
Ọsọ Abiola Esula nʻAPC
Posted July 24, 2018 April 18, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Ọgbaaghara adaala n’ụlọmmebeiwu nta nke Naịjiria nke a na-akpọ House of Representatives na Bekee. Ihe karịrị ndị omebeiwu iri atọ na asaa ahapụla All Progressive Congress (APC) ha nọbu na ya wee gbaga Peoples Democratic Party (PDP). Onye mere ka a mata nke a bụ Okwupụtaokwu ụlọomebeiwu ahụ bụ Yakubu Dogara. Maazị Dogara kwuru nke a mgbe ọrụ malitere ụbọchị Tuuzdee. Maazị a mekwara ka a mara na ndịomebeiwu […]
Fụransị Eburule Iko Bọọlụ Mba Ụwa nke Afọ 2018
Posted July 17, 2018 April 18, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Moscow – Obodo Fụransị eturule ugo n’egwuregwu bọọlụ mba ụwa nke Bekee kpọrọ World Cup nke bịara na ngwụcha ụbchị ụka. Fụransị jiri goolu anọ nke a sara naanị abụọ merie mba Kroeshia nʻasọmmpi egwuregwu bọọlụ ọkaibe ahụ nke e mere na Rọshịa. Nke a bụ nke ugboro abụọ mba Fransị na-ebute iko a. Tupu egwuregwu amalite, ọtụtụ ndị ọnọ nʻala mara egbe dị ime na-ekwu na Kroeshia, bụ ndị […]
Posted June 22, 2018 April 18, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Ndị otu egwu bọọlụ Naịjiria a na-akpo Super Eagles anyụọola ndị ogbo ha si Aịslandị ịkpakwụ nʻegwuregwu bọolụ. Naịjirịa jiri ọkpụ abụọ ana-asaghị asa merie ndị mba Aisilandi nʻegwuregwu bọọlụ mba ụwa nke a na-agba na Rọshịa. Mgbe egwuregwu a malitere, ndị Aisilandi bidoro mewe ụn̄ara ka a ga-asị na o nwere ebe ha ji azụ eje. Nke a mere ka agba nke mbụ bie nʻonye lawa onye lawa. Mana […]
Eze Williams Ezugwu Jere Hụ Ndịigbo na New England
Posted June 20, 2018 April 18, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Ụbọchị Ụka Ọnwa Juunu dị na mkpụrụ ụbọchị atọ ka eze a maara amara n’ala Igbo niile bụ Eze Williams Ezugwu (Eze Ogbozara III nke Opi), bịara na Boston ịhụ ndị Igbo bi bee ahụ. Eze Ezugwu onye na-achị obodo Opi nke dị n’akụkụ Nsụka, wụchara na Boston, ya na onye ndu ya bụ Sir Ambrose Ojimba (Ojinnaka nʻUli). Mgbe Eze Ezugwu a rụrụ Boston, ọ bụrụ ụzọ gaa n’Obigbo […]
World Igbo Congress Akwadowele Ọgbakọ na Mba Nashville Dị na Tennessee nke Amerịka
Posted June 17, 2018 April 18, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Otu jikọtara ndịigbo niile bi n’ofesi bụ World Igbo Congress (WIC) amalitela kwadowe maka mmemme ọgbakọ ukwu nke a ga-eme na mba Tennessee nke dị n’Amerịka malite n’ọnwa Ọgọọstị 30 ruo Septemba 2 n’afọ 2018. N’okwu mgbasa ozi ya, Onyeisioche WIC bụ Maazị Anthony Ejiofo kọwara na ọgbakọ a ga-enye ndiigbo ohere itiko isi ọnụ mara etu e si akwo onye ukwu wara.
Kroeshịa Emerila Naijirịa n’Asọmmpi Egwuregwu Bọọlụ Mbaụwa
Mmiri erughi eru mara Naijiria ụbọchị Satọdee mgbe ndị egwu bọọlụ mba Kroeshia jiri ọkpụ goolu abụọ a na-asaghị asa nyụọ ndị egwu bọọlụ Naijiria ịkpakwụ n’asọmmpi egwu bọọlụ mbaụwa nke a na-agba ugbu a na Rọshịa. Na mbido ya bụ egwuregwu, ndị Naijiria malitere nke ọma ma gbaa ndị na-ekiri ya bụ asọmmpi ume na ha maara nke ekwe na-akụ. Mana ebe e jighị ụtụtụ ama njọ ahịa, ọ […]
Posted May 30, 2018 April 18, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Taa ka o mere afọ iri ise na otu e hiwere Ala Biafra. Ihe butere nhiwe Biafra bụ nke doro ewu na ọkụkọ anya. Ndị Ugwu na-egbu ụmụigbo ka a ga-asị na ọ bụghị nne mụrụ ha. Ebe ọ bụ naanị osisi ka a ga-agwa na a ga-egbu ya ọ kwụrụ ebe ọ kwụ, ụmụigbo gwara onyendu ha bụ Dim Emeka Odumegwu Ojukwu, dike na dịmkpa, otu onye a na-asị […]